रोचक – पुरा पढ्नुहोस्……
खशी र घोडाको कथा एक मिनेट समय दिएर अवश्य हेर्नुहोला
एउटा किसानको घोडा बिरामी भयाे । उपचारका लागि पशु डाक्टरलाई बोलायो । डाक्टरले घोडा नियाल्दै भने, 'तपाईंको घोडा निकै बिरामी भइसक्याे, तीन दिनसम्म औषधि दिएर हेर्छु । तर निकाे भएन भएन भने मार्नुपर्छ किनकी यसको संक्रमण अरु जनावरमा पनि सर्नसक्छ ।' यो कुराकानी छेउमै बसिरहेकाे खसीले सुनिरहेको थियो । अर्को दिन डाक्टर आए र औषधि दिएर फर्किए । ऊ गएपछि खसी घोडाको छेउमा गयो र भन्यो, 'उठ साथी हिम्मत गर, नत्र यिनीहरुले तिमीलाई मारिदिन्छन् ।' दोस्रो दिन फेरि डाक्टर आए र औषधि दिएर फर्किए । खसी फेरि घोडाको छेउमा गयो र भन्यो, 'साथी तिमी उठ्नैपर्छ, हिम्मत गर, नत्र तिमी मारिन्छौ । म तिमीलाई मदत गर्छु, ल उठ ।' तेस्रो दिन जब डाक्टर आए र किसानलाई भने , 'अाेहाे, केही सुधार भएन, अब यसलाई मार्नुपर्छ ।' खसी फेरि घोडाको छेउमा गयो र भन्यो, 'देख्यौ साथी, अब तिम्रो लागि गर या मर भन्ने स्थिति आइसकेको छ । त्
काठमाडौँ। हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरूले निन्द्राबाट उठ्दा आफूले देखेका सपनाहरू बिर्सिने गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सपनामा देखेका कुराहरूले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनाको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको सङ्केत गर्ने गर्दछ । प्राय मान्छेहरू रातको समयमा देखेको सपना बिहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन् । यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा के हुन्छ? यदि आफूले देखेका केही अचम्मलाग्दा सपनाहरू निन्द्राबाट बिउँझिने बित्तिकै अरुलाई सुनाउने गर्दा तपाईँलाई त्यस सपनाको फल प्राप्त नहुने साथै यसले तपाईँको जीवनमा पर्ने प्रभाव घट्दै जाने विश्वास गरिन्छ। राम्रा सपना अन्नबाली, घोडचढी,कमलको फुल,गो
२८ श्रावण २०७७, बुधबार एजेन्सी , मनिसहरुले आफ्नो हातको रेखा हेरेर भविष्य हेर्ने गर्छन । आफ्नो दिन चर्य कसरी बित्ने छ भने पनि हात हेर्ने गर्दछन ।त्यति मात्रै होइन तपाईको हात हेरेर तपाईको स्वास्थ्यबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हातको प्रत्यक नङमा रहेको सेतो आधा चन्द्रमा निशानबाट पनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।नङको तल्लो भागमा सेतो आधा चद्र बनेको हुन्छ । नङको अरु भागभन्दा त्यो भाग अलि धेरै सेतो हुनेगर्छ । त्यो नंङको एउटा प्रमुख भाग पनि हो । यस भागलाई लेटिन भाषामा ‘लुनुला’ भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा सानो चन्द्र पनि भनिन्छ । यो निशान कुनै डिजाइन भने होइन । यसले तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने रहस्य खोल्छ ।चीनको परम्परागत स्वास्थ्य समुदायमा यसलाई कसैको स्वास्थ्य मापन गर्ने ब्यारोमिटरको रुपमा लिइन्छ । लुनुलाले तपाईको स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउने गर्छ । यदी तपाईको स्वास
"जूनूबी" नाम गरेका एकजना १५ बर्षीय बालकलाई एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट केही सामान चोरी गरेको अभियोगमा अमेरिकाको अदालतमा उपस्थित गराइयो। चोरी मुद्दामाथि अदालतमा बहस हुँदै गर्दा न्यायाधिसले ती बालकसँग प्रश्न गरे, के तिमीले साँच्चै स्टोरबाट सामान चोरी गरेका हौ? बालकले ,”भन्यो हो, मैले चोरि गरेकै हो! एक प्याकेट ब्रेड र एक प्याकेट पनिर! “ न्यायाधिसले प्रतिप्रश्न गरे, “किन चोर्यौ?”बालकले भन्यो ,”मलाई आवश्यक थियो! “ । न्यायाधिसले फेरी सोधे ,”किन्नुपर्ने थियो नि”? उक्त बालकले भन्यो ,”मसंग पैसा थिएन! “ न्यायधिसले भने “घरमा माग्नुपर्ने थियो त”। बालकले जवाफ दियो - “घरमा मेरी आमा र म मात्रै बस्छौँ! आमा बिरामी हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न! म एउटा मोटर वर्कसपमा काम गर्थेँ र जसोतसो आमालाई खुवाउँथे! तर आमाको स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो, आमाको हेरविचार गर्नका लागि मैले मालिकसँग छुट्टी मागेँ,
भगवान घिमिरे, भर्खरै कतार आएका थियौं । रहनसहन केही थाहा थिएन । अलखोर भन्ने शहरको भिल्ला नम्बर ५ मा ३५ जना बस्थ्यौं । एक दिन ४/५ जना चार तल्ला माथि छतमा बसेर भुइँतल्लाको किचेनमा खाना बनाइरहेका साथीहरुसँग अलि च’र्को स्वरमा कुरा गरिरहेका थियौं । यत्तिकैमा पारिपट्टिको छतमा रहेकी एउटी केटीले अरबी भाषामा हामीलाई झ’पार्न थाली । उसले सम्झिछ कि हामीले उसलाई जि’स्क्याउँदै छौं । रि’सले भु’त्भुताउँदै तल झरी । फेरि उसकी आमा छतमा आएर गाली गर्न पो लागिन् । गालीले सातोपुत्लो उडेर हामी तल भुइँतल्लामा झर्‍यौं । हामीलाई न त अरबिक नै आउँथ्यो, नत अंग्रेजी नै । त्यसैले हामी कुनै सफाई दिन लागेनौं । केहीबेर पछि एकजना अरबी ल्याण्डक्रुजर गाडीमा आएर हाम्रो गेट बाहिर आएर हर्न बजाउन थाल्यो । साथीहरु ड’रले थ’र्कमान भैहाले । हामीले अनुमान लगायौं, ती महिलाले बुढालाई भनिछ र बुढो चैं हामीलाई झ’पार्न
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचेत रहनुहोला
प्रविधिको बारेमा बेलामा नै हो’स नपुर्याए एकदिन जो कोही बर्बा’द हुनुपर्ने हुन्छ । किनकी जब थाहा हुन्छ । सबै कुरा विति’सकेको हुनेछ । चीʼनमा यस्तै भएको छ । त्यहाँ एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेʼलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाʼहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिʼएका थिए’नन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई बल्ल थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिर’हिछिन् । छोʼरीको कार्यले उनीहरुको होʼसहवा’स उडेको छ ।घटना चीनको हुबेइ प्रान्तको जिंगझोउ सहरको हो । त्याहाँकी चिङ नामकी महिलाले नयाँ फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरी’लाई खेलाउन दिएकी थिइन् । सुरुसुरुमा छोरीले यसमा गेम खेल्थिन् । फोन चा’लु अवस्थामा भएकोले एक दिन उनले आफ्नै फोʼनबाट बाʼहिरबाट नास्ता मगाइन् । यसको पैसा तिर
प्राय:मनिसहरुले आफ्नो हातको रेखा हेरे’र भविष्य हेर्ने गर्छन । आ’फ्नो दिन चर्य कसरी बित्ने छ भने पनि हात हेर्ने गर्दछन । त्यति मात्रै होइन तपाईको हात हेरेर तपाईको स्वास्थ्यबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।हातको प्रत्यक नङमा रहेको से’तो आधा चन्द्रमा निशान’बाट पनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर पत्ता ल’गाउन सकिन्छ । नङको तल्लो भागमा सेतो आधा चद्र बनेको हुन्छ । नङको अरु भागभन्दा त्यो भाग अलि धेरै सेतो हुनेगर्छ । त्यो नंङको एउटा प्रमुख भाग पनि हो । यस भागलाई लेटिन भाषामा ‘लुनुला’ भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा सानो चन्द्र पनि भनिन्छ । यो निशान कुनै डि’जाइन भने होइन । यसले तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने रहस्य खोल्छ । चीनको परम्परागत स्वास्थ्य समुदायमा यसलाई कसैको स्वा’स्थ्य मापन गर्ने ब्यारो’मिटरको रुपमा लिइन्छ । लुनुलाले तपाईको स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउने गर्छ । यदी तपाईको स्वास्थ्य ठीक छैन भ
काठमाडौं, असार २०-कोरोना भाइरसको आत' ङ्कले विश्वलाई थिचि'रहेका बेला नेपालमा सलहको आत;ङ्क थपिएको छ । कोरोनाले मानिसको ज्या;न लिइरहेको छ भने सलह चाहिँ मानिसले मीठो मानेर भोजन गरेको चर्चा छ। विदेशी मुलुकमा सलह भुटेर, उसिनेर, साँधेर अनि झोलसहित खाएका कैयौँ भिडियो यु ट्युबमै भेटिन्छन् । नेपालमा यो खान हुन्छ भन्ने एकथरी छन् भने खान हुँदैन भन्ने मत राख्ने विज्ञ छन् र उनीहरूले चरा, कुखुरा वा हाँसलाई दाना बनाएर दिन सकिने बाटो पनि देखाएका छन्। काठमाडौँं उपत्यकावासीले वर्षौंअघि नै सलहलाई हाँडीमा भुटेर खाएको इतिहास छ । १०१ वर्षीय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले नेपालमा सलह आएको उतिबेलै देख्न पाए। त्यतिबेला सलह पोलेर अनि हाँडीमा भुटेर काठमाडौँका मानिसले खाएको उनी बताउँछन्। त्यतिबेला सलह आकाशै ढाकेर आएका थिए । करोडौँ सङ्ख्यामा थिए भन्ने अनुमान छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका मानिसल
काठमाडौं। कोऽरोना भाइरʼसको महा,मारीका बीचमा केही रोचक घटʼनाहर पनि भइरहेका छन् । केही रोचक तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा भाइʼरल भइरहेका छन् । यही बीचमा अहिले सामाजिक संजालमा सुनको मास्क लगाएका एक व्यक्तिको तस्वीर भाइʼरल भइरहेको छ । समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार यी व्यक्ति महाराष्ट्रका शंकर कुराडे हुन् । उनलाई गोʼल्डेन म्यान भनेर पनि चिनिन्छ । सुʼनका गहना लगाउन सौखिन शंकरले सामान्य समयमा पनि करिब ३ किलो सुनका गहना लगाएर हिँड्छʼन् । शंकरले अहिले बनाएको माʼस्कको तौल ५० ग्रामभन्दा धेरै भएको बताइएको छ । यो मास्क २ लाख ८९ हजार भाʼरतीय रुपैयाँ मूल्यको भएको उनले बताएका छन् । शंʼकरका अनुसार यो माʼस्कमा साना साना प्वालहरु बनाइएको छ ताकि सास फेर्न कठिन नʼहोस् । यʼद्यपि यो मास्क प्रभावकारी हुन्छ वा हुँʼदैन भन्ने विषयमा आफू नै विश्वʼस्त नभएको उनले बताएका छन् ।
एजेन्सी – कोरोना संक्रमणबाट बृद्ध बृद्धामा जोखिम हुने चेतावनी चिकित्सक र बैज्ञानिकले दिइरहेका बेला एक १ सय १४ वर्षका बृद्धले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । समाचार हो अद्दिस अवावाको । अवा तिलाहुन वोल्डेमाइकलका परिवारले भने उनको उमेर १ सय १४ वर्ष भएको र उनी विशवकै सबैभन्दा पाको उमेरका मानिस भएके दावी गरेका छन् । हाल ति बृद्धको उनका नातीले हेर विचार गरिरहेको समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । चौंध दिन लामो उपचारको क्रममा उनलाई सात दिन जति अक्सिजना दिइएको उपचारमा संलग्न डा। हिलुफ एवेटले बताए । डा। हिलुफ एवेटले कोरोनाको लक्षण देखिनु अघि नै उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिए ।